बस दुर्घटना : मृतक परिवारलाई राहत दिइने
९ मंसिर २०७५, आईतवार १२:२५
राजविराज, ९ मंसिर । प्रदेश नं २ को सरकारले सप्तरी बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई रु. एक/एक लाख राहत दिने भएको छ ।
दुर्घटनामा घाइते भएकाको अवस्था तथा मृतकलाई श्रद्धाञ्जलि दिन सप्तरी आएका प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मृतक परिवारलाई रु. एक/एक लाख राहतस्वरुप दिने दिने घोषणा गरे ।
यसका साथै घाइते भएकाको उपचारमा लाग्ने खर्चसमेत प्रदेश सरकारले व्यर्होने मन्त्री यादवले घोषणा गरे । सुनसरीको वराह क्षेत्र र चतराधाम दर्शन गरेर फर्केका यात्रु बोकेको को १ ख २७९९ नंको बस अनियन्त्रित भई सप्तरीको भारदह–राजविराज सडकखण्डअन्तर्गत इनरुवा नजिकै रहेको पोखरीमा खसेर दुर्घटना भएको थियो ।
Tagsबस दुर्घटना राहत सप्तरी